छोरी भगवान्जस्ती थिई बाआमाको पी’डा बुझ्ने : उसकै पीरले छाती पोलेको छ, कहाँ होलिन् ? – Khabar Patrika Np
छोरी भगवान्जस्ती थिई बाआमाको पी’डा बुझ्ने : उसकै पीरले छाती पोलेको छ, कहाँ होलिन् ?
प्रकाशित मिति: आइतबार, आषाढ २७, २०७८ समय: ९:२६:०३
बिनाको परिवारले जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा छोरी खोजी पाऊँ भनी निवेदन दिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रवक्ता डीएसपी सूर्य थापाले घ’ट’नाको अ’नु’स’न्धा’न भइरहे पनि नयाँ कुरा फेला नपरेको बताए। ‘अ’नु’स’न्धा’नको क्रममै छ। बिनाका बुवा सम्पर्कमा हुनुहुन्छ।
उहाँसँग समन्वय गर्ने खोज्ने काम भइरहेको छ’, डीएसपी थापाले भने, ‘थप नयाँ कुरा खुलेको छैन। हामी बुझ्ने क्रममै छौं।’ प्रहरीले बिनाका प्रेमी भनिएका प्रवेशलाई अ’नुस’न्धा’नका लागि नि’य’न्त्र’णमा लिएको छ। उनको साथबाट ब’रा’म’द गरिएको बिनाको मोबाइलको स्क्रि’न फु’टेको छ। बिनाको परिवारका सदस्य प्रवेशसँगै अर्की युवतीलाई पनि नि’य’न्त्र”णमा लिएर अ’नु’स’न्धा’न गरे प’त्ता लाग्ने बताउँछन्।
गैंडाकोटको जनक कलेजमा बीबीएस तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत थिइन्। सापकोटा परिवार ११ वर्षअघि स्याङ्जाको पुतलीबजार नगरपालिका ठूलीबेंसीबाट गैंडाकोट बसाइ सरेको हो। केही वर्षअघिसम्म साइकल मर्मत पसल राखेका थिए। कोरोना म’हा’मा’री चलेपछि गत वर्षदेखि खाजा पसल गरेका थिए। दुई छोरीमध्ये बिना कान्छी हुन्। बिनाका ११ वर्षका एक भाइ छन्। ठूली छोरीको विवाह भइकेको छ।